Ny Xiaomi Mi Band 5 dia mety ho tonga amin'ny Fetiben'ny Mi Fan | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Band 5 dia mety ho tonga amin'ny Fetiben'ny Mi Fan
Rafa Rodriguez Ballesteros | | About us, Fitaovana hafa, Xiaomi
Manararaotra ny Fetin'ny Mi Fan nandrasana hatry ny ela fa hatramin'ny omaly dia manolotra fisondrotana, hetsika ary lalao, Nanambara ny fampisehoana i Xiaomi mandritra ny hetsika mihitsy hatramin'ny 22 ny vokatra vaovao an'ny sonia. Fantatsika ny habetsaky ny vokatra isan-karazany izay amboarin'ilay orinasa sinoa. Fa eo amin'izy rehetra, Mety hanana fahagagana isika ary anisan'ireo vokatra vaovao mety hitranga ny Mi Band 5.
Ny kinova fahadimy amin'ny fehin-tànana marani-tsaina malaza indrindra dia tena manakaiky ny famelezana ny tsena. Fehin-tànana tokony hananan'i Xiaomi ny fahombiazana manerantany. Gadget iray nampivondrona ny filozofia marika nampalaza an'izao tontolo izao, fampifangaroana tsy azo resena amin'ny fampisehoana sy ny vidiny. Na dia miaraka amin'ireo maodely finday avo lenta farany aza izy dia nifindra lavitra tamin'izany.
Ny Mi Band 5 dia mety hahagaga ny Fetin'ny Mi Fan
Araka ny lazainay, ny Mi Band dia iray amin'ny vokatra sahanin'i Xiaomi. Naseho fa amin'ny vokatra iray izay tsy mitentina € 30 dia afaka manao varotra varotra tsara indrindra ianao. Xiaomi dia nanao fitaovana azo tsidihina, mandra-pahatongan'ny fisehoany eny an-tsena, mora tratran'ny vitsy. Mampihena ny vidiny faran'izay betsaka ary afaka manolotra mitovy amin'ny ambiny amin'ny vidiny im-betsaka ambanin'ny salanisa. Fitaovana iray izay dia nivoatra tamin'ny hafainganam-pandeha tsara nefa tsy namoy ny fotony, izay tena ankasitrahana tokoa.
Efa ela ny olona no niresaka momba ny kinova Xiaomi Mi Band vaovao, ary heno fa ny Mi Fan Festival no daty mety indrindra. Aorian'ny fiatoana lehibe noterena ireo orinasa sinoa rehetra, niverina niasa tamin'ny hafainganam-pandeha frenetic. Ireo finday avo lenta vaovao Ny andiako 10 dia tsy ho irery eo amin'ireo zava-baovao ao amin'ny katalaoginy nandritra ny fotoana ela, ary azo inoana kokoa fa hiaraka amin'izy ireo ny Mi Band 5 tsy ho ela.
teo anivon 'ny vaovao antenainay ho an'ny Mi Band 5 vaovao avy amin'i Xiaomi no Fifandraisana NFC. Fahaiza-manao sy tombony lehibe kokoa ho an'ny Mi Band izay ahafahantsika mandoa banky. Ny fanatsarana hafa andrasana dia mifantoka amin'izany ny efijeryo izay mety hitombo amin'ny 0,95 santimetatra ankehitriny hatramin'ny 1,2 santimetatra. Araka ny hitantsika, ny akanjo Xiaomi malaza indrindra dia havaozina indray miaraka amin'ny fanatsarana lehibe. irery antenaina fa mbola mitazona ilay filozofia momba ny vidiny mitovy ihany ianao nanana hatrizay izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Xiaomi Mi Band 5 dia mety ho tonga amin'ny Fetiben'ny Mi Fan
Serivisy fitaterana azo itokisana tanteraka sy ny fizika misy azy mba handefasana fonosana sy hampiasana ny tananao
Ny Galaxy Note 20+ dia hampiasa ny chip Snapdragon 865